Accueil > Gazetin'ny nosy > Lalam-pifidianana: Be lavitra noho ny an’ny depiote ny kolikolin’ny loholona
Lalam-pifidianana: Be lavitra noho ny an’ny depiote ny kolikolin’ny loholona
Somary nandeha ho azy ny fankatoavan’ny loholon’i Madagasikara an’ireo tolo-dalàna fehizoro miisa 3 izay ikarakarana sy anatanterahana ny fifidianana eto. Loholona 53 tamin’ireo 54 nandray anjara no nankato azy ireo, ary tamin’ireo tolo-dalàna 3 karazana izay misy andininy anjatony maro dia ora telo sy sasany monja no nadinihan’ny teny amin’ny Antenimierandoholona azy tamin’ny talata.
Tsy re mihitsy hoe “nisy kolikoly avo lenta”. Satria nahay nanafina izy ireo dia nialokaloka tamin’ny hoe “loholona avy amin’ny HVm avokoa ange izahay ka izahay ve dia mila omena kolikoly vao hankato fehezan-dalàna izay?”
Re anefa omaly fa tena nisy tokoa ny kolikoly tao amin’ny Antenimierandoholona, ary ny Governemanta ihany no tonga nanampina ny mason’ireo loholona. Be lavitra noho ny nomena an’ireo solombava no notakian’ireo loholona, araka ny loharanom-baovao. 80 tapitrisa ariary ny ambany indrindra.
Ny antony dia hoe “raha tsy mahazo ny anjaranay izahay dia hitondranay fanitsiana maro ireo tolo-dalàna ireo ka tsy maintsy hiverina hodinihina eny Tsimbazaza izay itakiana ny maro an’isa hatramin’ny androatokon’ny solombava (2/3)”. May ny endim-boanjaon’ny fitondrana mpanatanteraka ka nitondra ny anjaran’ny Loholona. Saika nanodidina ny 100 tapitrisa ariary ny nomena azy ireo.
Manantena ny vahoaka fa hirotsaka an-tsehatra eny Anosikely, misy ny lapan’ny Antenimierandoholona koa ny Bianco hanao fanadihadiana momba izany.